Fil d'actualités du 20/02/2019
20/02/2019 - 11:30 : LAMASININA NIREHITRA: Fiaran-dalamby iray mpitatitra solika no nirehitra androany teny Ankorondrano vokatry ny hafanana be tao amin'ny motera, saingy voavonjy haingana.
20/02/2019 - 11:00 : SENDIKAN'NY ARTISTA: Tanterahina anio eny amin'ny Le Pavé Antaninarenina ny fifampiarahabana tratry ny taona arahin'ny fifidianana izay ho filohan'ny Sendika.
20/02/2019 - 10:30 : RAHARAHA MBOLA RAJAONAH: Nalain'ny fanjakana ny fiara iray tsy laitram-bala nampiasainy.
19/02/2019 - 14:00 : MORARANO TSARATANANA: Mpividy volamena nitondra fiara tsy mataho-dàlana saika hamonjy tsena notafihin'ny jiolahy 6 mitam-basy androany maraina tokony ho tamin'ny 6 ora. 4 naratra samy voatifitra avokoa, ny iray nalefa avy atrany aty Antananarivo ny 3 nentina notsaboina any amin'ny hopitaly Androva Mahajanga ka ny iray tamin'ireo zandary mpandeha tao anatin'ilay fiara.
19/02/2019 - 13:30 : HUGUES RATSIFERANA: Gadra herintaona an-tranomaizina miampy onintra 5 tapitrisa ariary no azony eo anatrehan'ny fanenjehana azy noho ny famoahana entana tao amin'ny AMDP.
19/02/2019 - 09:30 : FANADINAM-PANJAKANA: Vinavinaina hatao ny 27 aogositra 2019 ny CEPE, ny 9-12 septembra BEPC ary manomboka ny 30 septembra 2019 kosa ny bakalorea. Tsy misy saram-pisoratana anarana ny fandraisana anjara amin'ny CEPE sy ny BEPC araka ny lalàna manan-kery.
19/02/2019 - 09:00 : FONJAN'I TSIROANOMANDIDY: Voarara ny fitsidihana ireo voafonja mandra-pisian'ny toromarika vaovao noho ilay fitsoahana niseho nyh 16 febroary teo, ka nahatafaporitsaka ny gadra miisa 8 izay karohin'ny EMMOREG amin'izao fotoana izao.
19/02/2019 - 08:30 : KITROTRO : Mamely mafy ny kitrotro any amin'ny faritra SAVA tahaka ny ao Ampanefena, distrikan'i Vohémar, hatreny an-tokontany ny marary.
19/02/2019 - 08:00 : KIDNAPPING : Votsotra ilay chef ZAP niampy olona roa nisy naka an-keriny tany Tsaratanana herinandro teo ho eo izay.
Archive du 20180608
Depiote ho an’ny fanovana Hanao diabe eny amin’ny HCC
Governemantan’ny marimaritra iraisana Mampiahiahy, hoy i Eliane Bezaza
Datim-pifidianana tena izy Miandry ny governemanta vaovao, hoy ny CENI
Maka Alphonse Andao hosorohana ny krizim-pifidianana
Hafari Malagasy « Tsy maintsy haka fahefana izahay ! »
Fangaraharan’ny fifidianana Mila ovaina tanteraka ny CENI
JLM sy ny tolon’ny fanovana Hadihadio sy Tsarao ireo raharaha maloto
Praiminisitra natolotra sa ve notendrena ? Tena mangarahara sa politika avo lenta ? Tena fanina aho Ramalagasy fa mba hazavao. Dia ahoana ilay tsianjery hoe Miala jao ?
Joel Ralaivaohita “Tsy tokony ho an`ny HVM ny serasera”
Sendika Mahaleotenan’ny mpisafo raharahan’ny asa “Jereo manokana amin’izay ny momba anay”
Fandoavan-ketra ataon’ny mpivarotra Tokony hisy ny tamberim-bidy sy fiahiana ara-tsosialy
BABY SHOPPING Ahitana kojakoja sy entana amin’ny vidiny mirary ho an’ny ankizy
Fokonolona eny Analamahitsy Mangataka fanafoanana fampiadiana akoho
Kaominina Ivato Nanaiky ny fandaminana ireo mpivarotra
Basikety tompondaka nasionaly N 1 A vavy sy lahy Any Mahajanga ny dingana 1 manomboka anio
« Smatch-In version XXL 2018 » Miditra amin’ny 1/4-dalana anio zoma
Cosafa Cup 2018 I Zambie sy Zimbabwe no hanao famaranana
Mpampianatra mitokona Tambin-karama no tena maharary mafy azy ireo
Sakafo ara-pahasalamana Mbola mila ezaka i Madagasikara
Nantenaina Hihaona amin’ny mpankafy azy etsy amin’ny Telozoro
Mpiasan’ny minisiteran’ny raharaham-bahiny “Apetraho amin’ny hasiny ny diplomasia Malagasy”
Ady tany etsy manjaka Ilafy Vadin’olona ambony no miseho manjakazaka